Haweenka Iyo Dhaqaalaha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dhinacyada bulsho laga horumarinkaro waxaa kamida kobaca dhaqaalaha dal uu leeyahay. Dunida maanta waxyaabaha layskula dagaalamo waa dhaqaale, waxaad maqashaa waddanbaa waddan kale cunaqabatayn saaray IWM. Wuxuu saarayaa cunaqabatayn dhaqaale, dalkaasoo dhana saamayn ba’an ayay ku yeelanaysaa.
Dalkeena waa dal dihin oo khayraad ka buuxo laakiin maaha dal ay kunoolyihiin dad uqalma, caalamka waxaa jira waddamo aan lahayn wax khayraadah haddana dhaqaalohoodu uu sara kac sameeyo. Dalkayga hooyo waxaa lagu tiriyaah waddamada dunida ugu dhaqaalaha hooseeya.
Waxaa loo baahan yahay inaynu dhaqaalaha dalka horumar ku samayno, si aynu dalkeena sharaftiisa iyo magaciisaba kor ugu soo qaadno. Haddaba, siday haweenku uga qayb qaadankaraan dhaqaalaha dalkeena si ay ubuuxiyaan kaalinkii kaga aa danayd?
Ugu horayn dhaqaaluhu waa labo qaybood:
Dhaqaale/ganacsi balaadhan sida shirkado IWM.
Iyo ganacsiga yaryar macnaheedu maaha inuu yahay ganacsi hooseeya.
Dhaqaale meesha uu kasoo bilaamaa waa guriga, hooyo kasta waxay gacanta ku haysaa dhaqaalaha gurigeeda. Haweenka Soomaaliyeed waxay lama huraan uyihiin horumarka dhaqaalaha dalka.
Haweenku waa hormuud waana hoggaamiyayaal, waa hooyo waana macalimad, waa ganacsato, waana dhaqaalayahanad,waa barbaariyaal waana beeralay. Sidaas awgeed waxay dawr muhiima ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha.
Fursadaha uga banaan haweenka sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada iyo tan dhaqaalaha. Waxaa jira haween badan oo keena fikrado cusub oo horumarka ganacsiga dalka qayb lixaad leh ka qaadan lahaa laakiin lakulma waxay inaga mutaysteen wax ka hooseeya.
Bulshadeenu mayaqaanaan in ladhiirigaliyo fursadaha iyo fikradaha cusub ee dhaqaalaha dalka wax lagaga beddeli karo, hadday gabadh tahayna kaba sii daran.
Haddii la maalgaliyo fikradaha cusub ee ay haweenku hal abuuraan, waxaa wax wayn ka beddeli karnaa dhaqaalaha dalkeena maadaama ganacsiga uu saldhig u yahay hal-abuur fikrad cusub ku dhisan. Ha maalgaliyaan sharikadaha waawayn iyo dowladuba fikradaha cusub ee kasoo burqanaya maskaxaha ugubka ah ee caafimaadka qaba, si wax looga beddelo dhaqaalaha dalka.
Tags: Haweenka Iyo Dhaqaalaha
Next post Yaa Umuliso Noqon Kara?
Previous post Haweenka Iyo Hoggaanka